MacOS १०.१२. Bet बीटा, Wozniak एप्पल, स्टारक्राफ्ट मूल खेल, र अधिकको बारेमा कुरा गर्दछ। SoydeMac मा हप्ताको सबै भन्दा राम्रो | म म्याकबाट हुँ
MacOS १०.१२. Bet बिटा, वोज्नियाक एप्पल, स्टारक्राफ्ट मूल खेल, र अधिकको बारेमा कुरा गर्दछ। SoydeMac मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ
हामीसँग अप्रिलको अन्तिम हप्ता अगाडि छ र एप्पल अर्को सूचना नभएसम्म कुनै मुख्य भाषण नलगाउने आफ्नो योजना जारी राख्छ। यो सत्य हो कि तिनीहरूले आईप्याड अद्यावधिक र अन्य जारी गरे तर यो हाम्रो लागि अनौंठो देखिन्छ कि यस पटक वरपर कफर्टिनोका साथीहरूबाट मुख्य भनाइ थिएन। जे भए पनि फिलिप शिलरले म्याकहरू, एप्पल पार्क, नयाँ आईफोन स्पेशल एडिशन र अरूको बारेमा कुरा गरिसकेपछि हामीसँग जे छ हाम्रो अगाडि छ।। अप्रिलको यो असाधारण हप्ता हामीले महत्त्वपूर्ण समाचारहरू देख्यौं र अब आइतवार शान्त हामीले उनीहरूमध्ये केही देख्नेछौं।
यो संस्करणको साथ सुरू गर्ने समय हो macOS सियरा १०.१२.। बिटा। जुन निश्चित रूपमा यस बर्षको WWDC अघि अपरेटिंग प्रणालीको अन्तिम वा पेन्सोलिमेट संस्करण हुनेछ। व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ कि हामी भर्खरको संस्करणको सामना गरिरहेका छौं किनकि समाचार जूनका लागि सुरक्षित हुनेछ र त्यहाँ अझ छोटो महिना छ। हामी हेर्ने छौं कि त्यहाँ कुनै गल्ती छैन भने र यदि सबै योजना अनुसार हुन्छ भने, हामी विश्वास गर्दैनौं कि तिनीहरूले १०.१२. bet बिटा सुरु गर्छन् तर यो एप्पलको साथ तपाईलाई कहिले थाहा हुँदैन।
निम्न समाचारहरू को रूप मा आउँछ एप्पल सह-संस्थापक स्टीव वोज्नियाकबाट वक्तव्य। वोज यसका बारे स्पष्ट छ, भविष्यमा एप्पल अझ बढी बढ्नेछ र यो यस्तो चीज हो जुन धेरै विश्लेषकहरूले विश्वास गर्छन्।आंशिक मा कम्पनी को क्रय शक्ति को कारण र सबै भन्दा माथि यसको उत्पादनको कारण.
मूल स्टारकफ्ट खेल अब डाउनलोड गर्न स्वतन्त्र छ म्याकका लागि र यो सबै खेलाडीहरूको लागि ठूलो समाचार हो दिग्गज रणनीति खेल। यस अर्थमा यो मूल संस्करण हो र यो आशा गरिन्छ कि पौराणिक खेलको लागि अपडेटहरू आइपुगेका छन्।
एप्पल संगीत हालका महिनाहरु र अब मा एक मुष्ठ मुद्दाहरु को रोल आउट गर्दै छ तपाईंले क्लाइभ डेभिसको बारेमा वृत्तचित्रमा विशेष अधिकारहरू पाउनुहुनेछ। एप्पल अनुसरण गर्न को लागी कदमहरु को बारे मा स्पष्ट छ यसको स्ट्रिमि music संगीत सेवाको साथ।
र समाप्त गर्न हामी सिफारिस गर्दछौं पछिल्लो एप्पल पार्क भिडियो कि ती भवनमा धेरै नजिक छ जहाँ तिनीहरूले एक ड्रोन संग गरेको छ। यस अवस्थामा पनि तपाईं रातको «SpaceShip» जस्तो देखिनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ र यो वास्तवमै दर्शनीय छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » MacOS १०.१२. Bet बिटा, वोज्नियाक एप्पल, स्टारक्राफ्ट मूल खेल, र अधिकको बारेमा कुरा गर्दछ। SoydeMac मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ
स्थिर आईक्लाउड सदस्यता त्रुटिहरू यस हप्ता रेकर्ड गरियो
स्ट्रीमिंग प्लेयरको साथ नेटफ्लिक्सको आनन्द लिनुहोस्, सीमित समयको लागि नि: शुल्क